အာဖရိက တလွှားမှ အင်ပါယာများ - Thutazone
အာဖရိက တလွှားမှ အင်ပါယာများ
By ThutammPosted on December 22, 2018
အာရှ ၊ ဥရောပ နှင့် အမေရိက မှ အင်ပါယာများအကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့အများစု သိရှိပြီးဖြစ်သည်။ ထို့အတူ အာဖရိကတွင်လည်း သမိုင်းတလျှောက် Ajuran အင်ပါယာ ၊ မာလီအင်ပါယာ ၊ Songhai အင်ပါယာ ၊ ဘီနင်အင်ပါယာ Ashanti အင်ပါယာ ၊ Aksumite အင်ပါယာ စသည်ဖြင့် အင်ပါယာများ ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။
ဂါနာ ဘုရင့်နိုင်ငံ , မာလီအင်ပါယာ နှင့် Songhai အင်ပါယာ တို့ သည် အေဒီ ၁၀၀၀ မှ ၁၅၀၀ အချိန် အတွင်း အင်အားကြီးထွားခဲ့သည့် အင်ပါယာများ ဖြစ်ကြသည် ။ ထိုအင်ပါယာဒေသမှ ဘုရင်များသည် အာဖရိက အနောက်ဖက်ဒေသမှ ရွှေသတ္တုတူးဖေါ်သည့် လုပ်ငန်းများ နှင့် ကုန်သွယ်ရေးများကို ထိန်းချုပ်ခဲ့ကြသည် ။
ဂါနာ အင်ပါယာသည် အေဒီ ၅ -ရာစုအချိန်မှ စတင်ခဲ့ပြီး အင်ပါယာ၏ အမြင့်ဆုံး အချိန်သည် အေဒီ ၁၀၀၀ – ခုနှစ်အချိန်ခန့် ကဖြစ်ကာ ၁၃ -ရာစုအချိန်တွင် တစစီပြိုလ်ကွဲ သွားခဲ့ ကြသည် ။ ဂါနာ ဘုရင်များကျရှုံးပြီးနောက် ၁၃-ရာစုအချိန်တွင် ထိုဒေသ၌ မာလီအင်ပါယာ ထွန်းတောက်လာခဲ့ပြီး ၁၅-ရာစုအချိန်တွင် မာလီအင်ပါယာဒေသ အများအပြားသည် Songhai အင်ပါယာဒေသ ဖြစ်လာ ခဲ့သည် ။ ၁၅၉၁ – ခုနှစ်အချိန်တွင် မြောက်ဖက်မှ Moroccan လူမျိုးများမှ စစ်အောင်နိုင်မှု နှင့်အတူ Songhai အင်ပါယာ လုံးဝပျောက်ကွယ်ခဲ့ရသည် ။
အေဒီ ၅ – ရာစုအချိန်မှစ၍ အာဖရိကအနောက်ဖက်ဒေသတွင် တည်ရှိခဲ့သည့် ဘုရင့်နိုင်ငံဖြစ်ပြီး ထိုအချိန်က Mauritania နိုင်ငံ အရှေ့ တောင်ဖက် ဒေသ နှင့် မာလီနိုင်ငံ အနောက်တောင်ဖက် ဒေသတွင် တည်ရှိခဲ့သည် ။ ယနေ့ ဂါနာနိုင်ငံသည် ထိုအချိန်က တည်ရှိခဲ့သည့် သူတို့ ၏ ဘုရင့်နိုင်ငံ အမည်ကိုရယူထားခြင်း ဖြစ်သည် ။
ထိုအချိန်က ဂါနာဘုရင့်နိုင်ငံကို ထူထောင်ခဲ့ကြသူများမှာ Soninke လူမျိုးများဖြစ်ကြပြီး သူတို့ဒေသတွင်းမှ ထွက်ရှိသည့် ရွှေများကို သယ်ဆောင်ကာ ၊ အာဖရိကမြောက်ဖက်ဒေသရှိ မူဆလင်များ၏ ထွက်ကုန် ဆားများဖြင့် လဲလှယ်ကုန်သွယ်ခဲ့ကြသည်ဟုဆိုသည် ။ သူတို့ ၏မြို့ တော်သည် ယနေ့Mauritania နိုင်ငံ အရှေ့ တောင်ဖက်ရှိ Kumbi Saleh မြို့ ဖြစ်ပြီး အင်ပါယာ၏ အမြင့်ဆုံး အင်အားကောင်းချိန်သည် အေဒီ ၁၀၀၀ – ခုနှစ်အချိန်ခန့် ကဖြစ်သည် ။
အေဒီ ၁၀၇၆ – ခုနှစ်တွင် ထိုဒေသရှိ Berbers အုပ်စုမှ စတင်တော်လှန်မှု နှင့်အတူ ဂါနာဘုရင်များ အင်အားကျဆင်းလာခဲ့ပြီး ၁၂၀၃ – ခုနှစ်တွင် ဂါနာအင်ပါယာ၏ မြို့ တော် အား Susu လူမျိုးများမှ သိမ်းယူခဲ့ကြသည် ။ အေဒီ ၁၂၃၅ – ခုနှစ်အချိန်တွင် Kangaba ဒေသမှ ဘုရင် Sundiata Keita သည် ဂါနာများအား Battle of Kirina စစ်ပွဲတွင် အနိုင်ရခဲ့ပြီးနောက် ဂါနာအင်ပါယာ ကျရှုံးပျောက်ကွယ်ခဲ့ရသည် ။
အေဒီ ( ၁၃- ၁၄ ) ရာစုအချိန်က အာဖရိက အနောက်ဖက်ဒေသတွင် တည်ရှိခဲ့သည့် အင်အားကြီးမားသည့် အာဖရိကန်လူမျိုးများ၏ အင်ပါယာတခုဖြစ်သည် ။ မာလီ အင်ပါယာသည် Niger မြစ်ဒေသတွင် တည်ရှိခဲ့ပြီး စိုက်ပျိုးရေးဖြစ်ထွန်းရာဒေသ ဖြစ်ကာ ရွှေသတ္တုများ တည်ရှိသည့် ဒေသလည်း ဖြစ်သည် ။ ဤဒေသ သည် ၁၁ -ရာစုအလယ်ခေတ် အချိန်က ဂါနာဘုရင်များကြီးစိုးရာ ဂါနာအင်ပါယာဒေသ ဖြစ်ခဲ့သည် ။
အေဒီ ၁၂၃၅ – ခုနှစ်အချိန်တွင် Kangaba ဒေသမှ ဘုရင် Sundiata Keita သည် ဂါနာများအား Battle of Kirina စစ်ပွဲတွင် အနိုင်ရခဲ့ပြီးနောက် ဂါနာအင်ပါယာ ကျရှုံးပျောက်ကွယ်ခဲ့ရသည် ။ ထို့ နောက် Sundiata Keita သည် ထိုဒေသမှ အုပ်စုငယ်များကိုစုစည်းကာ မာလီ အင်ပါယာကို စတင် ထူထောင်ခဲ့သည်ဟု မှတ်တမ်းများမှဆိုသည် ။
Sundiata လက်ထက်တွင် မာလီ အင်ပါယာသည် အလျင်အမြန် ကျယ်ပြန့် လာခဲ့ပြီး အနောက်ဖက် အတ္တလန်တိတ်ကမ်းခြေဒေသ ၊ အရှေ့ ဖက်တွင် Niger မြစ်ဒေသ ၊ မြောက်ဖက် ဆာဟာရကန္တာရ ဒေသ အထိ ကျယ်ပြန့် ခဲ့သည် ။
ထိုအချိန်က အင်ပါယာ၏ မြို့ တော်မှာ Niani ဖြစ်ပြီး အင်ပါယာထဲတွင် ကွန်ဖက်ဒေးရှင်းပြည်နယ် ၃ -နယ် နှင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ၁၂ – ခုကို ပေါင်းစည်းထားသည့် အင်ပါယာဖြစ်သည် ။ မာလီဘုရင်များသည် ဒေသတွင်းထွက်ရှိသည့် ရွှေများကို ဥရောပဒေသများ ၊ မူဆလင်တို့ ၏ မြို့ တော် ယနေ့ ဆော်ဒီအာရေဗီယနိုင်ငံ မက္ကာဒေသသို့ ကုလားအုပ်များ ဖြင့် သွားလာကာရောင်းဝယ်ခဲ့ကြသည်။
အစ္စလမ် အယူဝါဒပြန့် နှံ့ လာမှု နှင့်အတူ မာလီဘုရင် Mansa Musa သည် အစ္စလမ် ဘာသာဝင်တဦး ဖြစ်လာခဲ့ပြီးနောက် ဤဒေသတွင်အစ္စလမ် အယူဝါဒများ ပိုမိုပြန့် နှံ့ လာခဲ့သည် ။ အေဒီ ၁၄ – ရာစုအချိန်တွင် မြောက်ပိုင်းပြည်နယ်များမှ တော်လှန်ပုံကန်မှု နှင့်အတူ အင်ပါယာ သည် အင်အား ကျဆင်းလာခဲ့သည် ။
ပထမဆုံး Songhai လူမျိုးများသည် လွတ်လပ်ရေး ရယူပြီးကိုယ်ပိုင်ခွဲထွက် သွားခဲ့သည် ။ အေဒီ ၁၅- ရာစုအချိန်တွင် မာလီအင်ပါယာဒေသ အများအပြားသည် Songhai Empire ဒေသ ဖြစ်လာခဲ့သည် ။
အာဖရိကအနောက်ဖက် Niger မြစ်ဒေသတွင် တည်ရှိခဲ့သည့် အင်ပါယာဖြစ်ပြီး သူတို့ ၏ အမြင့်ဆုံးအချိန်သည် အေဒီ (၁၅ – ၁၆ ) ရာစု အချိန်ကဖြစ်သည် ။ Songhai လူမျိုးများ၏ မူလနေရာသည် နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံ အနောက်မြောက်ဖက် Dendi ဒေသဖြစ်ပြီး သူတို့ သည် ငါးဖမ်းလုပ် ၊ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းများဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြသူများ ဖြစ်သည် ။
အေဒီ ၈-ရာစုအချိန်တွင် သူတို့ ၏ စီးပွားရေးမြို့ ကို ယနေ့ မာလီနိုင်ငံ Gao မြို့ တွင် ထူထောင်ခဲ့ပြီး နောက် သူတို့ ၏နေရပ်သည် တဖြည်းဖြည်းကျယ်ပြန့် လာခဲ့သည် ။ Songhai လူမျိုးများ၏ ဒေသသည် ၁၃ -ရာစုအချိန်က မာလီအင်ပါယာဒေသ ဖြစ်သည် ။
Songhai လူမျိုးများသည် အင်အားကြီးထွားလာခဲ့ပြီးနောက် ၁၃- ရာစုနှောင်းပိုင်းအချိန်တွင် မာလီအင်ပါယာဒေသ မှ ခွဲထွက်ပြီး Sunni dynasty ကို ထူထောင်ခဲ့ကြသည် ။ အေဒီ ၁၄၇၁ – ခုနှစ်အချိန် ဘုရင် Sunni Ali လက်ထက်တွင် မာလီအင်ပါယာ၏ အရှေ့ ဖက်ဒေသများ ကို သိမ်းယူခဲ့ပြီးနောက် Songhai empire သည်လည်း ကြီးမားကျယ်ပြန့် လာခဲ့သည် ။
Songhai အင်ပါယာ ကျယ်ပြန့် လာမှု နှင့်အတူ နယ်မြေများကို မထိန်းချုပ်နိုင်ဘဲ ပြည်နယ်များစွာခွဲထွက် လာခဲ့ပြီး အင်အားကျဆင်းလာခဲ့သည် ။ ၁၅၉၁ – ခုနှစ်အချိန်တွင် မြောက်ဖက်မှ Moroccan လူမျိုးများမှ ဤဒေသကို သိမ်းယူမှု နှင့်အတူ Songhai အင်ပါယာ သည် လုံးဝပျောက်ကွယ်ခဲ့ရသည် ။
အာဖရိက တလှားမှ အငျပါယာမြား
အာရှ ၊ ဥရောပ နှငျ့ အမရေိက မှ အငျပါယာမြားအကွောငျးကို ကြှနျုပျတို့အမြားစု သိရှိပွီးဖွဈသညျ။ ထို့အတူ အာဖရိကတှငျလညျး သမိုငျးတလြှောကျ Ajuran အငျပါယာ ၊ မာလီအငျပါယာ ၊ Songhai အငျပါယာ ၊ ဘီနငျအငျပါယာ Ashanti အငျပါယာ ၊ Aksumite အငျပါယာ စသညျဖွငျ့ အငျပါယာမြား ပျေါပေါကျခဲ့သညျ။
ဂါနာ ဘုရငျ့နိုငျငံ , မာလီအငျပါယာ နှငျ့ Songhai အငျပါယာ တို့သညျ အဒေီ ၁၀၀၀ မှ ၁၅၀၀ အခြိနျ အတှငျး အငျအားကွီးထှားခဲ့သညျ့ အငျပါယာမြား ဖွဈကွသညျ ။ ထိုအငျပါယာဒသေမှ ဘုရငျမြားသညျ အာဖရိက အနောကျဖကျဒသေမှ ရှသေတ်တုတူးဖျေါသညျ့ လုပျငနျးမြား နှငျ့ ကုနျသှယျရေးမြားကို ထိနျးခြုပျခဲ့ကွသညျ ။
ဂါနာ အငျပါယာသညျ အဒေီ ၅ -ရာစုအခြိနျမှ စတငျခဲ့ပွီး အငျပါယာ၏ အမွငျ့ဆုံး အခြိနျသညျ အဒေီ ၁၀၀၀ – ခုနှဈအခြိနျခနျ့ကဖွဈကာ ၁၃ -ရာစုအခြိနျတှငျ တစစီပွိုလျကှဲ သှားခဲ့ ကွသညျ ။ ဂါနာ ဘုရငျမြားကရြှုံးပွီးနောကျ ၁၃-ရာစုအခြိနျတှငျ ထိုဒသေ၌ မာလီအငျပါယာ ထှနျးတောကျလာခဲ့ပွီး ၁၅-ရာစုအခြိနျတှငျ မာလီအငျပါယာဒသေ အမြားအပွားသညျ Songhai အငျပါယာဒသေ ဖွဈလာ ခဲ့သညျ ။ ၁၅၉၁ – ခုနှဈအခြိနျတှငျ မွောကျဖကျမှ Moroccan လူမြိုးမြားမှ စဈအောငျနိုငျမှု နှငျ့အတူ Songhai အငျပါယာ လုံးဝပြောကျကှယျခဲ့ရသညျ ။
အဒေီ ၅ – ရာစုအခြိနျမှစ၍ အာဖရိကအနောကျဖကျဒသေတှငျ တညျရှိခဲ့သညျ့ ဘုရငျ့နိုငျငံဖွဈပွီး ထိုအခြိနျက Mauritania နိုငျငံ အရှတေ့ောငျဖကျ ဒသေ နှငျ့ မာလီနိုငျငံ အနောကျတောငျဖကျ ဒသေတှငျ တညျရှိခဲ့သညျ ။ ယနဂေ့ါနာနိုငျငံသညျ ထိုအခြိနျက တညျရှိခဲ့သညျ့ သူတို့၏ ဘုရငျ့နိုငျငံ အမညျကိုရယူထားခွငျး ဖွဈသညျ ။
ထိုအခြိနျက ဂါနာဘုရငျ့နိုငျငံကို ထူထောငျခဲ့ကွသူမြားမှာ Soninke လူမြိုးမြားဖွဈကွပွီး သူတို့ ဒသေတှငျးမှ ထှကျရှိသညျ့ ရှမြေားကို သယျဆောငျကာ ၊ အာဖရိကမွောကျဖကျဒသေရှိ မူဆလငျမြား၏ ထှကျကုနျ ဆားမြားဖွငျ့ လဲလှယျကုနျသှယျခဲ့ကွသညျဟုဆိုသညျ ။ သူတို့၏မွို့တျောသညျ ယနေ့ Mauritania နိုငျငံ အရှတေ့ောငျဖကျရှိ Kumbi Saleh မွို့ဖွဈပွီး အငျပါယာ၏ အမွငျ့ဆုံး အငျအားကောငျးခြိနျသညျ အဒေီ ၁၀၀၀ – ခုနှဈအခြိနျခနျ့ကဖွဈသညျ ။
အဒေီ ၁၀၇၆ – ခုနှဈတှငျ ထိုဒသေရှိ Berbers အုပျစုမှ စတငျတျောလှနျမှု နှငျ့အတူ ဂါနာဘုရငျမြား အငျအားကဆြငျးလာခဲ့ပွီး ၁၂၀၃ – ခုနှဈတှငျ ဂါနာအငျပါယာ၏ မွို့တျော အား Susu လူမြိုးမြားမှ သိမျးယူခဲ့ကွသညျ ။ အဒေီ ၁၂၃၅ – ခုနှဈအခြိနျတှငျ Kangaba ဒသေမှ ဘုရငျ Sundiata Keita သညျ ဂါနာမြားအား Battle of Kirina စဈပှဲတှငျ အနိုငျရခဲ့ပွီးနောကျ ဂါနာအငျပါယာ ကရြှုံးပြောကျကှယျခဲ့ရသညျ ။
အဒေီ ( ၁၃- ၁၄ ) ရာစုအခြိနျက အာဖရိက အနောကျဖကျဒသေတှငျ တညျရှိခဲ့သညျ့ အငျအားကွီးမားသညျ့ အာဖရိကနျလူမြိုးမြား၏ အငျပါယာတခုဖွဈသညျ ။ မာလီ အငျပါယာသညျ Niger မွဈဒသေတှငျ တညျရှိခဲ့ပွီး စိုကျပြိုးရေးဖွဈထှနျးရာဒသေ ဖွဈကာ ရှသေတ်တုမြား တညျရှိသညျ့ ဒသေလညျး ဖွဈသညျ ။ ဤဒသေ သညျ ၁၁ -ရာစုအလယျခတျေ အခြိနျက ဂါနာဘုရငျမြားကွီးစိုးရာ ဂါနာအငျပါယာဒသေ ဖွဈခဲ့သညျ ။
အဒေီ ၁၂၃၅ – ခုနှဈအခြိနျတှငျ Kangaba ဒသေမှ ဘုရငျ Sundiata Keita သညျ ဂါနာမြားအား Battle of Kirina စဈပှဲတှငျ အနိုငျရခဲ့ပွီးနောကျ ဂါနာအငျပါယာ ကရြှုံးပြောကျကှယျခဲ့ရသညျ ။ ထို့နောကျ Sundiata Keita သညျ ထိုဒသေမှ အုပျစုငယျမြားကိုစုစညျးကာ မာလီ အငျပါယာကို စတငျ ထူထောငျခဲ့သညျဟု မှတျတမျးမြားမှဆိုသညျ ။
Sundiata လကျထကျတှငျ မာလီ အငျပါယာသညျ အလငျြအမွနျ ကယျြပွနျ့လာခဲ့ပွီး အနောကျဖကျ အတ်တလနျတိတျကမျးခွဒေသေ ၊ အရှဖေ့ကျတှငျ Niger မွဈဒသေ ၊ မွောကျဖကျ ဆာဟာရကန္တာရ ဒသေ အထိ ကယျြပွနျ့ခဲ့သညျ ။
ထိုအခြိနျက အငျပါယာ၏ မွို့တျောမှာ Niani ဖွဈပွီး အငျပါယာထဲတှငျ ကှနျဖကျဒေးရှငျးပွညျနယျ ၃ -နယျ နှငျ့ ကိုယျပိုငျအုပျခြုပျခှငျ့ရဒသေ ၁၂ – ခုကို ပေါငျးစညျးထားသညျ့ အငျပါယာဖွဈသညျ ။ မာလီဘုရငျမြားသညျ ဒသေတှငျးထှကျရှိသညျ့ ရှမြေားကို ဥရောပဒသေမြား ၊ မူဆလငျတို့၏ မွို့တျော ယနဆေ့ျောဒီအာရဗေီယနိုငျငံ မက်ကာဒသေသို့ကုလားအုပျမြား ဖွငျ့ သှားလာကာရောငျးဝယျခဲ့ကွသညျ။
အစ်စလမျ အယူဝါဒပွနျ့နှံ့လာမှု နှငျ့အတူ မာလီဘုရငျ Mansa Musa သညျ အစ်စလမျ ဘာသာဝငျတဦး ဖွဈလာခဲ့ပွီးနောကျ ဤဒသေတှငျအစ်စလမျ အယူဝါဒမြား ပိုမိုပွနျ့နှံ့လာခဲ့သညျ ။ အဒေီ ၁၄ – ရာစုအခြိနျတှငျ မွောကျပိုငျးပွညျနယျမြားမှ တျောလှနျပုံကနျမှု နှငျ့အတူ အငျပါယာ သညျ အငျအား ကဆြငျးလာခဲ့သညျ ။
ပထမဆုံး Songhai လူမြိုးမြားသညျ လှတျလပျရေး ရယူပွီးကိုယျပိုငျခှဲထှကျ သှားခဲ့သညျ ။ အဒေီ ၁၅- ရာစုအခြိနျတှငျ မာလီအငျပါယာဒသေ အမြားအပွားသညျ Songhai Empire ဒသေ ဖွဈလာခဲ့သညျ ။
အာဖရိကအနောကျဖကျ Niger မွဈဒသေတှငျ တညျရှိခဲ့သညျ့ အငျပါယာဖွဈပွီး သူတို့၏ အမွငျ့ဆုံးအခြိနျသညျ အဒေီ (၁၅ – ၁၆ ) ရာစု အခြိနျကဖွဈသညျ ။ Songhai လူမြိုးမြား၏ မူလနရောသညျ နိုငျဂြီးရီးယားနိုငျငံ အနောကျမွောကျဖကျ Dendi ဒသေဖွဈပွီး သူတို့သညျ ငါးဖမျးလုပျ ၊ ကုနျသှယျလုပျငနျးမြားဖွငျ့ အသကျမှေးဝမျးကွောငျးပွုကွသူမြား ဖွဈသညျ ။
အဒေီ ၈-ရာစုအခြိနျတှငျ သူတို့၏ စီးပှားရေးမွို့ကို ယနမေ့ာလီနိုငျငံ Gao မွို့တှငျ ထူထောငျခဲ့ပွီး နောကျ သူတို့၏နရေပျသညျ တဖွညျးဖွညျးကယျြပွနျ့လာခဲ့သညျ ။ Songhai လူမြိုးမြား၏ ဒသေသညျ ၁၃ -ရာစုအခြိနျက မာလီအငျပါယာဒသေ ဖွဈသညျ ။
Songhai လူမြိုးမြားသညျ အငျအားကွီးထှားလာခဲ့ပွီးနောကျ ၁၃- ရာစုနှောငျးပိုငျးအခြိနျတှငျ မာလီအငျပါယာဒသေ မှ ခှဲထှကျပွီး Sunni dynasty ကို ထူထောငျခဲ့ကွသညျ ။ အဒေီ ၁၄၇၁ – ခုနှဈအခြိနျ ဘုရငျ Sunni Ali လကျထကျတှငျ မာလီအငျပါယာ၏ အရှဖေ့ကျဒသေမြား ကို သိမျးယူခဲ့ပွီးနောကျ Songhai empire သညျလညျး ကွီးမားကယျြပွနျ့လာခဲ့သညျ ။
Songhai အငျပါယာ ကယျြပွနျ့လာမှု နှငျ့အတူ နယျမွမြေားကို မထိနျးခြုပျနိုငျဘဲ ပွညျနယျမြားစှာခှဲထှကျ လာခဲ့ပွီး အငျအားကဆြငျးလာခဲ့သညျ ။ ၁၅၉၁ – ခုနှဈအခြိနျတှငျ မွောကျဖကျမှ Moroccan လူမြိုးမြားမှ ဤဒသေကို သိမျးယူမှု နှငျ့အတူ Songhai အငျပါယာ သညျ လုံးဝပြောကျကှယျခဲ့ရသညျ ။
Previous post မြန်မာ့ပထမဆုံး ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး နှင့် ဆာဘွဲ့ရသူ
Next post တစ်စီးရှင် သီဟသူ ဆိုတာ
One thought on “အာဖရိက တလွှားမှ အင်ပါယာများ”
kingdom of Kush in Sudan is most advance among the Africa. (You Thutazone miss out), They conquest the Egyptian and entire Nile Basin. It also included Levant.